Jubbaland iyo Puntland oo diiddan ka qeyb galka shirka Xamar | KEYDMEDIA ONLINE
Jubbaland iyo Puntland oo diiddan ka qeyb galka shirka Xamar
Dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ayaa diidan in ay ka qeyb galaan shirka uu horay u iclaamiyay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo kaasoo loo qorsheeyay inuu ka dhaco magaalada Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dowlad Goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay shuruudo ku xireen ka qeyb galka shirkii uu ku baaqay Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo kaasoo dhowr jeer oo hore dib u dhaca uu ku yimid.
Madaxweyneyaasha labadaas maamul ayaan weli soo gaarin magaalada Muqdisho, si ay uga qeyb galaan shirka uu ku baaqay Farmaajo, warar hoose oo ay heshay Keydmedia Online ayaa waxay sheegayaan in ay adagtahay in ay aqbalaan ka qeyb galka shirkaasi, waxayna ku xireen shuroodo hor leh ka qeyb galka shirkaasi.
Hoggaamiyayaasha Jubbaland iyo Puntland ayaa la sheegay inay dalbadeen in ay goobjoog ka noqdaan Wakiilada Beesha Caalamka shrika lagu saxiixayo heshiiskii lagu gaaray Baydhabo.
Shardiga ugu adag ayaa ah in shirka uu ka dhaco Xerada Xalane, waxayna sheegeen in aysan haysan kalsooni amnigooda lagu sugayo, waxayna tilmaameen in madaxweyne Farmaajo ay ka suurtowdo wax walba, maadaama uu amray in la weeraro madaxweynayaashii xilka uga horreeyay iyo sidoo kale qaar kamida golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya.
Madaxweynayaasha isbahaystay ee Jubbaland iyo Puntland ayaa horay usoo jeediyay in shirka la ballaariyo, lagana qeyb galiyo saamileyda siyaasadda iyo xubnaha beesha caalamka. murankan ayaa cirka isku shareeray kaddib bannaanbixii shalay ee loo adeegsaday rasaasta, iyo weerarkii habeen hore lagu qaaday Hotel Ma'ida ee mas'uuliyiintii hore ee dalka xilal kala duwan kasoo qabtay.